I-Cabana Mirador el Rosario - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e inqugwala sinombuki zindwendwe onguJorg
Indlu yamaplanga enamagumbi amabini amancinci, enye ineebhedi ezingamawele, enye inebhedi enkulu. Kumatrasi wondwendwe lwesihlanu kumgangatho. Hlamba ngeehamnethi ezimbini, itafile nezitulo.
Siyakuthanda ukwamkela abahambi abangatshatanga, yiloo nto sibhatalisa umntu ngamnye. Nangona kunjalo, impela-veki kufuneka iindwendwe ezimbini ubuncinane.
Iqela leendwendwe ezimbini linokukhetha elinye lamagumbi, elinye liza kutshixwa.
Siphila emaphethelweni eLa Tigra Nationalpark, ihlathi eliphantsi kokukhuselwa ukususela ngo-1980, iparadesi yokwenene kubathandi bendalo kunye neentaka. Ezizodwa izindlu derilict of the New York and Honduras el Rosario Mining Company. Kukho ii-pulperias ezimbini kunye neekhefi kufutshane, apho unokufumana khona izidlo kunye nokutya okufudumeleyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Jorg
Sisegcekeni lonke ixesha, sikulungele ukunika ulwazi kwaye sikhonze iziselo ezishushu okanye ezibandayo kodwa akukho sidlo sasemini. Siyakuvuyela ukuncokola neendwendwe zethu emva kwesidlo sakusihlwa ngeglasi yeti ye-limongrass okanye i-lacewine eyenziwe ekhaya. Sithetha isiNgesi, isiSpanish nesiJamani.
Sisegcekeni lonke ixesha, sikulungele ukunika ulwazi kwaye sikhonze iziselo ezishushu okanye ezibandayo kodwa akukho sidlo sasemini. Siyakuvuyela ukuncokola neendwendwe zethu emva…